ဘဝမှာ အခက်​အခဲကြုံလာသူတွေအတွက် တ​နေ့ (၉)ပတ်​စိပ်​ပြီး (၉)ရက်​အဓိဋ္ဌာန်​ ပုတီးစိပ်​နည်း…! – XB Media Myanmar
စိတ်​ပျံ့လွင့်​သူများအတွက်​ ပုတီးစိပ်​နည်း​လေး​ပေးပါ့မယ်​။ပုတီးစိပ်​နည်း အမျိုးမျိုးရှိလို့ ကိုယ်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​ရာ စိပ်​လို့ရပါတယ်​။တခုခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲ စိပ်​​စေချင်​ပါတယ်​။ ဦးဇင်း​ပေးတဲ့ပုတီးစိပ်​နည်း​လေးကို ​အောက်​မှာ​ရေး​ပေးထားပါတယ်​။
တခါ်​တ​လေကိုယ့်​ဘဝမှာအခက်​အခဲတခုခုကြုံလာရင်​ တ​နေ့ (၉)ပတ်​စိပ်​ပြီး (၉)ရက်​အဓိဋ္ဌာန်​ဝင်​ပြီးစိပ်​ကြည့်​ပါ။တစ်​ရက်​တည်း( ၉ )ပတ်​ကို တခါတည်းမစိပ်​နိုင်​ရင်​လည်း ခွဲစိပ်​လို့ရပါတယ်​။ဥပမာ မနက်​ သုံးပတ်​၊​နေ့လည်​ သုံးပတ်​ ည သုံးပတ်​​ပေါ့။ယုံယုံကြည်​ကြည်​နဲ့တကယ်​လုပ်​ကြည့်​ပါ။ပထမအကြိမ်​ မထူးခြား​သေးရင်​ ဒုတိယအကြိမ်​ဆက်​လုပ်​လိုက်​ပါ။တစ်​ကြိမ်​မှာ​တော့ဆု​တောင်းပြည့်​လာပါလိမ့်​မယ်​။ ကိုယ့်​ဘဝရဲ့ကံဇာတာ​တွေထူးခြားလာပါလိမ့်​မယ်​။
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ပုတီးတစ်​လုံးချ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ။ ပုတီးတစ်​လုံးချ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပုတီးတစ်​လုံးချ
အရဟံ တစ်​လုံးချ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ တစ်​လုံးချ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပ​န္နော
သုဂ​တော ​လောကဝိဒူ အနုတ္တ​ရောပုရိသဓမ္မသာရထိ သထ္ထာ​ဒေဝမနုဿာနံ ဗု​ဒေ ဘဂဝါ ပုတီးတစ်​လုံးချ
​ဟေတုပစ္စ​ယော ပုတီးတစ်​လုံးချ အာရမ္မဏ ပစ္စယော ပုတီးတစ်​လုံးချ
နိဿ . ယပစ္စ​ယော
ပြီးရင်​ သရဏဂုံသုံးပါးက​နေ ပြန်​စိပ်​လိုက်​ပါ။ တစ်​​ခေါက်​လျှင်​ ပုတီး၃၆ လုံးဖြစ်​ပြီး သုံး​ခေါက်​စိပ်​လျှင်​ ပုတီးတစ်​ပတ်​ရပါသည်​။ကံဇာတာ​တွေထူးခြားလာ၍ ကံ​ကောင်းခြင်း​တွေပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေ။
စိတျ​ပြံ့လှငျ့​သူမြားအတှကျ​ ပုတီးစိပျ​နညျး​လေး​ပေးပါ့မယျ​။ပုတီးစိပျ​နညျး အမြိုးမြိုးရှိလို့ ကိုယျ​ကွိုကျ​နှဈ​သကျ​ရာ စိပျ​လို့ရပါတယျ​။တခုခုကိုစှဲစှဲမွဲမွဲ စိပျ​​စခေငျြ​ပါတယျ​။ ဦးဇငျး​ပေးတဲ့ပုတီးစိပျ​နညျး​လေးကို ​အောကျ​မှာ​ရေး​ပေးထားပါတယျ​။
တချါ​တ​လကေိုယျ့​ဘဝမှာအခကျ​အခဲတခုခုကွုံလာရငျ​ တ​နေ့ (၉)ပတျ​စိပျ​ပွီး (၉)ရကျ​အဓိဋ်ဌာနျ​ဝငျ​ပွီးစိပျ​ကွညျ့​ပါ။တဈ​ရကျ​တညျး( ၉ )ပတျ​ကို တခါတညျးမစိပျ​နိုငျ​ရငျ​လညျး ခှဲစိပျ​လို့ရပါတယျ​။ဥပမာ မနကျ​ သုံးပတျ​၊​နလေ့ညျ​ သုံးပတျ​ ည သုံးပတျ​​ပေါ့။ယုံယုံကွညျ​ကွညျ​နဲ့တကယျ​လုပျ​ကွညျ့​ပါ။ပထမအကွိမျ​ မထူးခွား​သေးရငျ​ ဒုတိယအကွိမျ​ဆကျ​လုပျ​လိုကျ​ပါ။တဈ​ကွိမျ​မှာ​တော့ဆု​တောငျးပွညျ့​လာပါလိမျ့​မယျ​။ ကိုယျ့​ဘဝရဲ့ကံဇာတာ​တှထေူးခွားလာပါလိမျ့​မယျ​။
ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ။ ပုတီးတဈ​လုံးခြ ဓမ်မံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ ။ ပုတီးတဈ​လုံးခြ သံဃံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ ပုတီးတဈ​လုံးခြ
အရဟံ တဈ​လုံးခြ သမ်မာသမ်ဗုဒေါ်ဓ တဈ​လုံးခြ ဝိဇ်ဇာစရဏသမ်ပ​န်နော
သုဂ​တော ​လောကဝိဒူ အနုတ်တ​ရောပုရိသဓမ်မသာရထိ သထ်ထာ​ဒဝေမနုဿာနံ ဗု​ဒေ ဘဂဝါ ပုတီးတဈ​လုံးခြ
​ဟတေုပစ်စ​ယော ပုတီးတဈ​လုံးခြ အာရမ်မဏ ပစ်စယော ပုတီးတဈ​လုံးခြ
နိဿ . ယပစ်စ​ယော
ပွီးရငျ​ သရဏဂုံသုံးပါးက​နေ ပွနျ​စိပျ​လိုကျ​ပါ။ တဈ​​ခေါကျ​လြှငျ​ ပုတီး၃၆ လုံးဖွဈ​ပွီး သုံး​ခေါကျ​စိပျ​လြှငျ​ ပုတီးတဈ​ပတျ​ရပါသညျ​။ကံဇာတာ​တှထေူးခွားလာ၍ ကံ​ကောငျးခွငျး​တှပေိုငျ​ဆိုငျ​နိုငျ​ကွပါ​စေ။